Ogaden News Agency (ONA) – Shirka Jaliyadda Norway oo lagu cambaareeyey gumaadka ka dhacay Gunagado
25-Feb-2012- Waxaa caawa fiidkii kulan heer sare ah lagu soo gabagabeeyey magaaladdaOsloee xarunta u ah wadankaNorway, shirkii xubnaha Jaaliyadda S. Ogadeenya oo bishii hal mar la qabto.
Kulankan oo lagu furay Aayado kamid ah quraanka kariimka ah oo uu akhriyey Sheikh Abdiwali garaad ka dib ayay xubnaha guda galeen inay inay ka doodaan qodabadii Ajendayaash shirka oo loo qaybiyay. Waxaa war-bixin kooban oo taabaynaysay wax-qabadkii Jaaliyadd bisha February qaab cilmiyeysan u soo jeediyey gudoomiyaha jaaliyadda Mudane Abdirahman Sheikh Yusuf isagoo intaas kadib micrafoonka ku soo dhaweeyey hogaanka waxbarashada Jaaliyadda Dr. Abdirashiid Gooni, oo casharo ku saabsan maamulka iyo maareynta u soo jeediyey xubnaha kulanka.
Xoghayeha ururka OYSU-Norway Mudane Haruun Abdulaahi, ayaa sidoo kale xubanha uga xog-waramay qorsheyaasha u degsan ururka dhalinta iyo kaalinta looga baahan yahay inay ku garab-istaagaan halganka loogu jiro sidii gumeysiga looga xoreyn lahaa Shacabka dulman ee Ogadenia.
Shirkan oo uu aaladda isgaadhsiinta ee Video-conferenciga kaga soo qeyb-galay Mudane Cadaani Hirmooge, ayaa hadal kooban oo uu xubanaha u jeediyey kaga xogwaramay in xasuuqa Guna-gado ka dhacay uu yahay arin aad looga xumaado oo looga murugooda. Wuxuuna sheegay in hadda la diyaarinayno cadaymo gacan-ku dhiiglayaasha ka dambeeya gumaadka shacabka Ogadeenya ee aan waxba galabsan si maxkamad Loo soo taago, goor ay noqotaba.
Shirka waxaa cambaareyn adag looga soo jeediyey xasuuqa ay Woyaanaha iyo Hawaarintu ka geysteen degmada Guna-gado, halkaasoo asbuucii la soo dhaafay lagu laayay dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Sidoo kale, shirka ayaa ugu baaqay bulshadda caalamka sidii ay u joojin lahaayeen xasuuqa ba’an ee ka socda Ogadeenya, gargaar iyo badbaadana loola soo gaadhi lahaa dadka kumanaanka ah ee ay barakiciyeen maleeshiyaadka woyaanaha iyo daba-dhilifkooda islamarkaasna maxkamad loo soo taagi lahaa dambiilayaasha gumaadka geystey.
Waxaana xusid mudan in xasuuqa guna-gado ku soo beegmay iyadoo dunida dacaladeeda laga xusayey Maalinta Xasuuqa Ogadeenya, oo sanad walba la xuso bisha February.